Sets fandroana, lohany fandroana, tontonana fandroana - Chenpai
Tongasoa eto CHENGPAI
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina orana vy tsy manara-penitra anay dia manolotra ny vokatra tsara indrindra izahay.
Tongasoa eto amintsika mba hifandray aminay
Miaraka amin'ny vokatra Chengpai, azonao atao ny manana ranon'orana manarona ny lanitra maizina mba hanamaivanana ny havizanao amin'ny andro amin'izay tianao.
Mametraka hatrany ny kalitao amin'ny toerana voalohany ary manara-maso tsara ny kalitaon'ny vokatra isaky ny fizotrany.
Ny orinasa dia nitombo lasa Premier ISO9001: 2008 mpanamboatra voamarina amin'ny kalitao avo, vokatra mahomby
Tanànan'ny Shishan, Distrikan'i Nanhai, Tanànan'i Foshan, tanàna misy rafitra fitaterana aero-amphibious mety ho azy, ny tanjaka faharoa feno avo indrindra ary ny PIB avo indrindra ao amin'ny Faritanin'i Guangdong.
Toeran'ny fandroana telo
Tontonana fandroana poleta efamira miisa efatra nitaingina
Faucet an-dakozia LED ny vy vy
Ny valin-drihana mitaingina lohataona LED retangular
Loha fandroana boribory LED misy sandry showr
Manokana amin'ny famokarana ranonorana mandritra ny 10 taona dia aondrana erak'izao tontolo izao ny vokatra.
Chengpai dia manana patanty sinoa maromaro ho an'ny famoronana, patanty sinoa mihoatra ny 20 ho an'ny maodely sy endrika ivelany azo ampiasaina, ary mihoatra ny 10 vokatra teknolojia vaovao any Guangdong.
Amin'ny maha orinasa iraisana amin'ny famokarana-marketing, Chengpai dia nekena ho National High-Tech Enterprise, orinasa kely mifototra amin'ny teknolojia nasionaly, orinasa azo itokisana Guangdong, ary orinasa "ISO9001 voamarina ary nahazo mari-pankasitrahana marobe avy amin'ny fikambanana indostrialy .